Fehiloha vita amin'ny famononam-botoana avo lenta amin'ny fizotran'ny stainless vy
Frequency avo lenta mirefy Copper Coping ho an'ny Stainless teknolojia teknika famatsiana
Ny tanjon'io varahina fanosihosena io ho an'ny vy tsy azo ampiasaina amin'ny fampiasana DW-UHF-40kw famahana herinaratra famatsiana herinaratra miaraka amin'ny efitrano fandroana mahazatra
DW-UHF-40KW famatsiana herinaratra fampidinana
Ny hafanana: 1300 eo ho eo°F (704)°C
Fotoana: 3.5 min
0.5 ″ Ny fandrefesana ny rindrina
Stainless vy 4 ″ OD
Miara-miasa 2 ″
Mba hanombohana ny fanamboarana ny varahina amin'ny varahina amin'ny vy vy dia ny santionany dia nivezivezy tamin'ny turntable. The coil brazing coil avy eo napetraka teo amin'ny varahina satria malefaka kokoa noho ny vy stainless. Raha mihodina ny ampahany, manodidina ny 25kW no ampiharina eo amin'ny vainafo. Vantany vao akaiky ny mari-pana ny haingam-bolo ilay tadim-bolo, dia natolony ilay tady. Ny fanetren-tena amin'ny indostrian'ny fiaraha-miasa amin'ny vy vy dia vita sy nahomby.
Ny vokatry ny induction brazing varahina ho an'ny fanandramana stainless steel fitiliana fiasa tsara, ilay induction brazing vita ary vita varahina ny varahina tamin'ny vy vy. Ity fitsapana ity dia niteraka kalitao avo làlana sy famerimberenan'ny tonon-taolana, nitombo ny vokatra ary ny fifehezana ny fotoana sy ny hafanana.
Sokajy Technologies Tags brazing copper, rafitra varahina mirehitra, varahina manganohano varahina matevina, varahina ho an'ny vy vy, varahina ho an'ny vy vy HF, Masinina fanaova HF, Fanetren-tena amin'ny HF, haavo matetika, Fiovan'ny hafanana hafanana varahina, induction brazing Post Fikarohana